Home / समाचार / लालबाबु पण्डित भन्छन्– सबै विदेश गए देश कसले बनाउँछ ?
लालबाबु पण्डित भन्छन्– सबै विदेश गए देश कसले बनाउँछ ? 0
पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले अरुको मुलुकको विकासमा रमाउनेहरुलाइ परजिवीको संद्दा दिंदै नेपालको भविष्य पनि सुखमय हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले अरुको मुलुकको विकासमा रमाउनेहरुलाइ परजिवीको संद्दा दिंदै नेपालको भविष्य पनि सुखमय हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
११ बर्षे बालकको दर्दानाक घटना , संसारमा मेरी जस्ती आमा कसैको नहुन (भिडियो सहित)